सुत्ने समयमा यी ५ चिज सिरानीमुनी राख्नुस्, राम्रो निन्द्रा पर्छ ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»सुत्ने समयमा यी ५ चिज सिरानीमुनी राख्नुस्, राम्रो निन्द्रा पर्छ !
सुत्ने समयमा यी ५ चिज सिरानीमुनी राख्नुस्, राम्रो निन्द्रा पर्छ !
By रिता घिसिंग on ३१ भाद्र २०७५, आईतवार ०५:०८ धर्म/दर्शन
एजेन्सी : शास्त्र भन्छ दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ । रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन । तपाइँलाई ताजा अनुभव रातभरीको विश्राम पछि मात्र हुन्छ । दिनभरीको सुख शान्तिका लागि यी ५ चीज सुत्ने समयमा सिरानी मुनी राख्नु राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
१- हनुमान चालिसा
२- फलामको उपकरण
५- दुर्गा सप्तसती पाठ